इजरायलमा बलून बम पठाउँदै हमास, जवाफी कारवाहीमा हवाई आक्रमण (भिडियो)
इजरायल र प्यालेस्टाइनको उग्रवादी संगठन हमासबीचको तनाव झनै चर्किएको छ । गाजामा ११ दिनसम्म चलेको हिंस्रक संघर्ष रोकिएको भए पनि शान्ति बहाल हुन सकेको छैन । हमासका सदस्यहरू बलून, कन्डम र चंगामा बम फिट गरेर गाजाबाट दक्षिण इजरायलतर्फ बढाइरहेका छन् । जवाफी कारवाहीमा इजरायली वायुसेनाले गाजामा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरिरहेको छ । प्यालेस्टाइनी सूत्रहरूका अनुसार, इजरायलले गाजामा अनेकौं ठाउँ ध्वस्त पारिदिएको छ । नागरिक प्रशासनको एक भवन पनि आक्रमणमा ध्वस्त भएको बताइएको छ । अनि कैयौं खेतहरू पनि ध्वस्त भएका छन् ।...
गाजामा हवाई आक्रमण गरेर के सन्देश दिन चाहन्छ इजरायलको नयाँ सरकार ?
इजरायलमा नफ्टाली बेनेटको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै त्यहाँको वायुसेनाले गाजा स्ट्रिपमा बुधवार बिहानै हवाई आक्रमण गरेको छ । गाजाबाट लडाकूहरूले दक्षिण इजरायलमा बम भएको बलून पठाएपछि जवाफी कारवाहीस्वरूप हवाई आक्रमण गरिएको बताइएको छ । गत मे २१ मा इजरायल र गाजामा युद्धविराम भएपछि पहिलोपटक हवाई आक्रमण गरिएको हो । उक्त संघर्षमा २६० प्यालेस्टाइनी र १३ इजरायलीहरूले ज्यान गुमाएका थिए । प्यालेस्टाइनी स्रोतहरूका अनुसार, इजरायलको वायुसेनाले गाजाको खान युनेसको एक स्थानलाई तारो बनाएको छ ...
अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा गाजामा युद्धविराम, तर देशभित्र हुँदैछ नेतान्यूको आलोचना
गाजामा भइरहेको आक्रमण रोक्दै युद्धविराम गर्न इजरायल र हमास सहमत भएका छन्। करिब दुई हप्तादेखि गाजा पट्टीमा इजायलले हवाई आक्रमण गर्न सयौं प्यालेसटाइनी नागरिकको मृत्यु भएको थियो भने कयौं भवनहरु भत्किएका थिए। हमासले पनि इजरायलमा रकेट आक्रमण गर्दा केही इजयालीको मृत्यु भएको थियो। दुवैबिच युद्धविराम गराउन अमेरिका, चीन, बेलायत, रसिया…
पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८
गाजामा जारी छ इजरायलको हवाई आक्रमण, प्यालेस्टाइनको समर्थनमा देखिए फुटबलरहरु
इजरायल र प्यालेस्टाइनबिचको तनाव पछिल्लो समय उत्कर्षमा छ। कोभिड महामारीबिचको यो तनावले विश्वको ध्यान तानेको छ। त्यसको प्रभाव केहीदिनयता फुटबलमा पनि देखिन थालेको छ। गएराति घरेलु मैदानमा सिजनको अन्तिम खेल खेल्दै गर्दा म्यानचेस्टर युनाइटेडका पउल पोग्वा र अमाद डियालो प्यालेस्टाइनको झण्डासहित देखिए। फुलहमसँगको १-१ गोलको बराबरीसँगै घरेलु मैदानमा सिजनको अन्तिम…
के हो इजरायल-प्यालेस्टाइन विवादको चुरो ?
१ जेठ, काठमाडौं । इजरायलको सेना र प्यालेस्टाइन लडाकूबीच यतिबेला द्वन्द्व चलिरहेको छ । गत सोमबारदेखि द्वन्द्व जारी छ । द्वन्द्वका क्रममा इजरायली सेनाले गाजा क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरिरहेको छ । गाजा क्षेत्रबाट पनि प्यालेस्टाइन लडाकुले इजरायलमा निरन्तर रकेट आक्रमण गर्दै आएका छन् । यो युद्धमा परी अहिलेसम्म गाजा क्षेत्रका १०० भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको […]
इजरायलविरुद्ध साउदी अरबले बोलायो ओआइसीको आपतकालीन बैठक
बीबीसी। इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच संघर्ष चर्केपछि साउदी अरबले आज इस्लामिक देशहरुको संगठन (ओआइसी)को आपतकालीन बैठक बोलाएको छ। बैठकमा ओआइसी सदस्य ५७ रास्ट्रका बिदेशमन्त्रीहरु सहभागी हुने जनाइएको छ। प्यालेस्टाइनको पक्षमा माहोल बनाउन बैठक बोलाइएको हो। पछिल्ला दिन इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच संघर्ष चर्केको छ। इजरायलले प्यालेस्टाइनमा हवाई आक्रमण र प्यालेस्टाइनले इजरायलमा रकेट आक्रमण गर्दै आएका छन्।
इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व : अहिलेसम्म १०० भन्दा बढी प्यालेस्टिनी र ७ इजरायली नागरिकको मृत्यु
इजरायलले हवाई आक्रमण गर्दा यसरी ढल्यो गाजाको भवन (भिडियो)
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच द्वन्द्व चर्किंदा इजरायलले गाजामा लगातार हवाई आक्रमण गरिरहेको छ । यसैक्रममा गाजामा रहेको १२ तल्ले एक घरमा इजरायली रकेट प्रहार हुँदा त्यो ढलेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । इजरायलले यसरी गाजाको घर ढालेपछि हमासले तेल अभिभतर्फ १३० वटा रकेट प्रहार गरेको जनाएको छ । Israeli airstrikes demolish Gaza tower block before Hamas fires 130 rockets at Tel Aviv in the most deadly outbreak of violence pic.twitter.com/qVas9RUETR— The Sun (@TheSun) May 12, 2021
इजरायल र हमासबीच युद्ध भड्किँदा गाजा कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु
इजरायल र हमासबीचको शत्रुता बुधवार चर्किंदा गाजामा कम्तीमा ३५ जना मारिएका छन् भने इजरायलमा पाँचजनाले ज्यान गुमाएका छन् । गाजामा इजरायलले बुधवार बिहान सयौंवटा हवाई आक्रमण गरेको थियो भने हमास तथा अन्य प्यालेस्टाइनी लडाकू समूहले तेल अभिभ र बीरशेबामा अनेकौं रकेट प्रहार गरेका थिए । इजरायलको निरन्तर हवाई आक्रमणका कारण गाजामा रहेको अग्लो आवासीय भवन आक्रमणमा परी भत्केको थियो भने अर्कोमा गम्भीर क्षति पुगेको थियो । सन् २०१४ मा इजरायल र हमासबीच भएको युद्धपछि यो सबभन्दा भीषण भिडन्त हो । परिस्थि...
हमास र इजरायलबीच युद्धबिराम
गाजा सिटी । इजरायलले गाजा क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेलगत्तै हमास समूहले इजरायल समक्ष युद्धबिराम भएको जनाएको छ । इजिप्टको मध्यस्थतामा...
राजधानी दैनिक फाल्गुन २०७५
गाजा सिटी, चैैत १२ गते । इजरायलले गाजा क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेलगत्तै हमास समूहले इजरायल समक्ष युद्धबिराम भएको जनाएको छ । इजिप्टको...
गोरखापत्र फाल्गुन २०७५